समाचार - संसारमा १० सबैभन्दा प्रसिद्ध मूर्तिकारहरूको बारेमा तपाइँ कति जनालाई चिन्नुहुन्छ?
कति जना तपाईलाई थाहा छ संसारमा १० सबैभन्दा प्रसिद्ध मूर्तिकलाहरु को बारे मा?
संसारमा यी १० वटा मूर्तिकलाहरूमध्ये कतिलाई थाहा छ?तीन आयाममा, मूर्तिकला (मूर्तिकला) को लामो इतिहास र परम्परा र समृद्ध कलात्मक अवधारणा छ। संगमरमर, पीतल, काठ र अन्य सामग्रीहरू नक्काशी गरिएको छ, नक्काशी गरियो र निश्चित स्थानको साथ दृश्य र मूर्त कलात्मक छविहरू सिर्जना गर्न मूर्तिकार गरिएको छ, सामाजिक जीवन झल्काउँछ र कलाकारहरूको सौन्दर्य भावनाहरू अभिव्यक्त गर्दछ, सौंदर्यवादी आदर्शहरूको कलात्मक अभिव्यक्ति।पश्चिमी मूर्तिकला कलाको विकासले तीनवटा चुचुरोहरूको अनुभव गरेको छ, जुन हामीलाई थाहा छ यो कलाको पूर्ण तस्वीर प्रस्तुत गर्दै छ। यो प्राचीन ग्रीस र रोम मा आफ्नो पहिलो चरम पुगेको। शिखर फिगर फिडिया थियो, जबकि इटालियन पुनर्जागरण दोस्रो चोटी बने। निस्सन्देह माइकलएन्जेलो यस युगको शिखर फिगर थियो। १ th औं शताब्दीमा, फ्रान्स रोडिनको उपलब्धिको कारण थियो र तेस्रो चोटीमा प्रवेश गर्‍यो।
रोडिन पछि पश्चिमी मूर्तिकलाले नयाँ युगमा प्रवेश गर्‍यो - आधुनिक मूर्तिकलाको युग। मूर्तिकला कलाकारहरूले शास्त्रीय मूर्तिकलाको दाck्गोबाट मुक्त हुने, अभिव्यक्तिको नयाँ रूपहरू अपनाउने, र नयाँ अवधारणाहरूको अनुसरण गर्ने प्रयास गर्छन्।
आजकल, हामी कलात्मक रचनाहरू र मूर्तिकला कला को Panoramic ईतिहास को माध्यम बाट प्रत्येक अवधि को सफलता देखाउन सक्छौं, र यी १० मूर्तिकलाहरु थाहा हुनुपर्दछ।
नेफर्टिटीको बस्ट एक 3,3०० वर्ष पुरानो चित्रित चित्र हो जुन चूना ढुstone्गा र प्लास्टरले बनेको हो। मूर्ति कुँदिएको छ, नेफर्टिटी, प्राचीन मिश्री फारो अखेनतेन को महान शाही पत्नी। सामान्यतया यो विश्वास गरिन्छ कि यो मूर्ति मूर्तिकार थुटमोजले ई.पू. १ 134545 मा खोपिएको थियो।
नेफर्टिटीको बस्ट सबैभन्दा धेरै प्रजननहरूसहित पुरातन इजिप्टको सबैभन्दा व्यापक रूपमा प्रशंसा गरिएको छविहरू मध्ये एक भएको छ। यो बर्लिन संग्रहालयको स्टार प्रदर्शन हो र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सौन्दर्य सूचकको रूपमा मानिन्छ। नेफर्टिटीको मूर्तिलाई पुरानो कलाको सबैभन्दा प्रतिष्ठित कलाको रूपमा वर्णन गरिएको छ, तुतानखमुनको मास्कसँग दाँजेर।
“यो मूर्तिले लामो बाँडा, रमणीय धनुको आकारको आइब्रो, अग्लो गाला, हड्डी, लामो पातलो नाक र रातो ओठले जीवन्त मुस्कान भएको महिला देखाउँदछ। यो Nefertiti कला को एक पुरानो काम बनाउँछ। सबैभन्दा सुन्दर महिला मध्ये एक। "
बर्लिनको संग्रहालय टापुको नयाँ संग्रहालयमा अवस्थित छ।
सामोथ्रेसमा विजयको देवी
सामोथ्रेसमा विजयको देवी, संगमरमरको मूर्ति, 8२8 सेमी अग्लो। यो एउटा प्रख्यात शिल्पकलाको मौलिक कार्य हो जुन पुरानो ग्रीक कालमा अस्तित्वमा थियो। यो दुर्लभ खजानाको रूपमा लिइन्छ र लेखक जाँच हुन सक्दैन।
उनी इजिप्टको राजा टोलेमीको बेसीको विरुद्धमा पुरानो ग्रीसको समुद्री युद्धमा सामोथ्रेसका विजेता डेमेट्रियसको पराजयको स्मरणार्थ बनाउन कडा र नरम कलाकृतिको संयोजन हो। ईसापूर्व १ 190 ० तिर, विजयी राजा र सैनिकहरूको स्वागत गर्न यो प्रतिमा सामोथ्रेसको मन्दिरको अगाडि निर्माण गरियो। समुद्री हावाको सामना गर्दै, देवीले उनका भव्य पखेटाहरू फैलाइदिनुभयो, मानौं कि उनी तटवर्ती आएका नायकहरूलाई अrace्गाल्ने छन्। मूर्तिको टाउको र हातहरू विकृत पारिएको छ, तर उनको सुन्दर शरीर अझै पातलो कपडा र पटाहरू मार्फत प्रकट गर्न सकिन्छ, जीवन शक्ति विकिरणित। पूरै मूर्तिमा एक विशाल आत्मा छ, जसले यसको विषयवस्तु पूर्ण रूपमा प्रतिबिम्बित गर्दछ र अविस्मरणीय छवि छोड्दछ।
पेरिसमा अवस्थित लुभ्रे लुभ्रेको तीन खजाना मध्ये एक हो।
मिलोसको एफ्रोडाइट, ब्रोकन आर्मको साथ भेनसको रूपमा पनि चिनिन्छ। यो ग्रीस महिला मूर्तिहरु मध्ये अब सम्म सबैभन्दा सुन्दर मूर्ति को रूप मा मान्यता प्राप्त छ। एफ्रोडाइट प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथामा प्रेम र सौन्दर्यको देवी हो, र ओलम्पसका बाह्र देवताहरू मध्ये एक हो। एफ्रोडाइट सेक्सको देवी मात्र होइन, उनी विश्वमा प्रेम र सौन्दर्यको पनि देवी हुन्।
एफ्रोडाइटमा पुरातन ग्रीक महिलाहरूको उत्तम आकृति र उपस्थिति छ, प्रेम र महिलाको सुन्दरताको प्रतीक हो, र महिला शारीरिक सुन्दरताको उच्च प्रतीक मानिन्छ। यो भव्यता र आकर्षणको मिश्रण हो। उनको सबै व्यवहार र भाषा एक मोडल राख्नु र प्रयोग गर्न लायक छ, तर यसले महिला शुद्धता प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन।
भाँचिएको हतियारको साथ भेनसको हराएको हातहरू जस्तो देखिन्थ्यो कलाकार र इतिहासकारहरूमा सबैभन्दा चासो रहस्यको विषय भएको छ। यो मूर्तिकला हाल पेरिसको लूभ्रेमा अवस्थित छ, ती तीन खजानाहरू मध्ये एक हो।
डोनाटेल्लोको काँसाको शिल्प "डेभिड" (सी। १4040०) नग्न मूर्तिहरूको पुरानो परम्परालाई पुनर्जीवित गर्ने पहिलो काम हो।
मूर्तिमा, यो बाइबलीय आकृति अब अवधारणाको प्रतीक होइन, तर जीवित, मासु र रगतको जीवन हो। धार्मिक छविहरू अभिव्यक्त गर्न र शरीरको सौन्दर्यलाई जोड दिन नग्न छविहरूको प्रयोगले यो कामको माइलस्टोन महत्त्व छ भनेर संकेत गर्छ।
ईसापूर्व १० औं शताब्दीमा इस्राएलका राजा हेरोदले शासन गर्दा पलिश्तीहरूले आक्रमण गरे। गोल्यत नाम गरेको योद्धा थियो, जो feet फिट अग्लो र ठूलो हलबर्डले सशस्त्र थियो। इस्राएलीहरूले .० दिनसम्म लडाईं गरेनन्। एक दिन, जवान दाऊद सेनामा सेवा गरिरहेका आफ्नो भाइलाई भेट्न गए। उनले सुने कि गोल्यत एकदम दमदार छन र उनको आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍यायो। राजाले हेरोदले भने कि गोल्यत बाहिर गएर इस्राएलीहरूलाई मार्न आफ्नो बदनाम गर्न राजी भयो। हेरोदले यसको लागि सोध्न सकेन। डेभिड बाहिर आए पछि, उनी गर्जिए र गोल्यत उनको टाउकोमा हिर्काए। छक्क परेको त्यो ठूलो भूँईमा लडयो र दाऊदले आफ्नो तरवार धारिलो गरी गोल्यतको टाउको काटिदियो। डेभिडलाई मूर्तिमा गोठालो गोठालोको रूपमा चित्रण गरिएको छ, गोठालो टोपी लगाएको थियो, दाहिने हातमा तरवार समात्दै, र गोल्यतको टाउको उसको खुट्टामुनि राख्दै। उनको अनुहार मा अभिव्यक्ति यति फुर्सत छ र एक सानो गर्व देखिन्छ।
डोनाटेल्लो (डोनाटेल्लो १ 1386-14-१-1466)) इटालीमा प्रारम्भिक पुनर्जागरणका कलाकारहरूको पहिलो पुस्ता र १ 15 औं शताब्दीको सबैभन्दा उल्लेखनीय शिल्पकार थियो। मूर्तिकला अहिले इटालीको फ्लोरेन्सको बार्गेलो ग्यालरीमा छ।
"डेभिड" को मूर्ति १ 16 औं शताब्दीको सुरूमा सिर्जना गरिएको थियो। मूर्ति 3..9 meters मिटर अग्लो छ। यो रेनेसान्स मूर्तिकलाका मास्टर माइकलएन्जेलोको प्रतिनिधि कार्य हो। यसलाई पश्चिमी कलाको इतिहासमा सब भन्दा घमण्ड गर्ने पुरुष मानव प्रतिमा मध्ये एक मानिन्छ। दाउदको टाउको मिचेन्जेलोको चित्रण युद्धको अघि थोरै देब्रेतिर फर्केको थियो, उसको आँखा दुश्मनमा टुक्रिएको थियो, उसको देब्रे हातले काँधमा घुँयेत्रो पक्रेको थियो, दाहिने हात निस्किरहेको थियो, उसको मुट्ठी हल्का निस्केको थियो, उसको उपस्थिति शान्त थियो, दाऊदको रचनालाई देखाउँदै , साहस र जीत को विश्वस्तता। फ्लोरन्स एकेडेमी अफ फाइन आर्टमा अवस्थित।
स्ट्याचु अफ लिबर्टी (स्ट्याचु अफ लिबर्टी) लाई लिबर्टी ज्ञानवर्धक द वर्ल्ड (लिबर्टी इन्लाइटनिंग द वर्ल्ड) पनि भनिन्छ, १ France France France मा संयुक्त राज्य अमेरिकालाई फ्रान्सको १०० औं वार्षिकोत्सव उपहार हो। स्ट्याच्यू अफ लिबर्टी प्रसिद्ध फ्रान्सेली मूर्तिकार बार्थोल्डीले पूरा गरेका थिए। १० बर्षमा। लेडी लिबर्टीले पुरानो ग्रीक शैलीको कपडा लगाएको छ, र उसले लगाएको मुकुटले सात महाद्वीपका सात स्पाइरहरू र विश्वको चार महासागरहरूको प्रतीक हो।
देवीले आफ्नो दाहिने हातमा स्वतन्त्रताको प्रतीक मशाल समातिन् र उनको देब्रे हातले जुलाई,, १ 17ra on मा खोपिएको "स्वतन्त्रताको घोषणा" राखीरहेकी थिई, र उनको खुट्टामुनि भाँचिएका हथकड, पट्टि र साins्गलाहरू छन्। उनी स्वतन्त्रताको प्रतीक हो र निरंकुशताको अवरोधबाट स्वतन्त्र हुन्छिन्। यो अक्टूबर २ 28, १। Completed। मा सम्पन्न भयो र अनावरण गरियो। यसमा बनेको फलामको मूर्तिको आन्तरिक संरचना गुस्ताभ एफिलले डिजाइन गरेका थिए, जसले पछि पेरिसमा एफिल टावर निर्माण गरे। स्ट्याच्यू अफ लिबर्टी meters 46 मिटर अग्लो छ र यसको आधार 93 meters मिटर छ र २२ 22 टन छ। १ 1984। 1984 मा, स्ट्याचु अफ लिबर्टीलाई विश्व सांस्कृतिक विरासतको रूपमा सूचीबद्ध गरिएको थियो।
"The विचारक" एक कडा कामदार मानिस आकार दिन्छ। विशाल तल झुकेको थियो, घुँडा बा be्यो, उसको दाहिने हातले आफ्नो ठोडीलाई आराम गर्दै, चुपचाप हेरिरहेको थियो त्रासदी। उसको गहिरो निगाह र उसको मुठ्ठी उनको ओठले काट्ने इशाराले अत्यन्त दर्दनाक मुड देखायो। मूर्तिकलाको आकृति ना naked्गो हुन्छ, हल्का धनुष कम्मरको साथ। बायाँ हात स्वाभाविक रूपमा बाँया घुँडामा राखिन्छ, दायाँ खुट्टाले दाहिने हातको समर्थन गर्दछ, र दायाँ हातले तीखो लाइनर भएको चिनको मूर्तिलाई हटाउँदछ। क्लिन्क्ड मुट्ठी ओठको बिरूद्ध दबिएको छ। यो धेरै फिट छ। यस समयमा, उसका मांसपेशीहरू घबराइरहेका छन्, पूर्ण लाइनहरू प्रकट गर्दै। जे होस् प्रतिमाको तस्बिर अझै छ, यसले देखाउँदछ कि ऊ उच्च गहनताले काम गर्दैछ एक भक्तिभाव सहित।
"The विचारक" Auguste रोडिनको समग्र कार्य प्रणालीको एक नमूना हो। यो पनि उहाँको जादुई कलात्मक अभ्यासको एक प्रतिबिंब र प्रतिबिंब हो। यो उनको निर्माण र मानव कलात्मक विचार को एकिकरण को एक प्रतिबिम्ब हो - रोडिन को कलात्मक सोच प्रणाली गवाही।
जेफ कोन्स (जेफ कोन्स) एक प्रसिद्ध अमेरिकी पप कलाकार हो। २०१ 2013 मा, उसको बेलुन कुकुर (सुन्तला) पारदर्शी लेपित स्टेनलेस स्टीलको बनेको थियो, र क्रिस्टीले $.4..4 मिलियन डलरको रेकर्ड मूल्य सेट गर्न सक्षम भयो। कुन्न्सले नीलो, म्याजेन्टा, रातो र पहेंलोमा पनि अन्य संस्करणहरू सिर्जना गर्‍यो।
लुइस बुर्जुवाले बनाएको प्रसिद्ध काम "स्पाइडर" feet० फिट भन्दा अग्लो छ। के प्रभावशाली छ कि ठूलो स्पाइडर मूर्तिकला कलाकार आफ्नै आमा, जो एक कालीन रिपेयरर थियो सम्बन्धित छ। अब, हामी देख्छौं यो माकुरा मूर्तिहरू, कमजोर देखिन्छ, लामो खुट्टा, साहसपूर्वक २ mar संगमरमर अण्डाको रक्षा गर्दछ, यदि तिनीहरू तुरुन्तै तल झर्छन्, तर यसले सफलतापूर्वक जनताको डर जगाउँदछ, माकुरो तिनीहरूको बारम्बार उपस्थिति हो विषयवस्तुमा मूर्तिकला माकुरा समावेश छ। १ 1996 1996 .। यो मूर्तिकला बिलबाओको गुग्नेहेम संग्रहालयमा अवस्थित छ। लुइस बुर्जुवाले एक पटक भनेका थिए: ठूला व्यक्ति, चलाख।
किन शिहुआ ofको टेराकोटा योद्धा र घोडा कसले बनाए? यो अनुमान गरिएको छ कि त्यहाँ कुनै उत्तर छैन, तर कलाको पछिल्लो पुस्तामा यसको प्रभाव आज पनि अवस्थित छ र एक फेसन प्रवृत्ति भएको छ।